Kenya oo xaqiijisay inay Ciidankeeda kala baxeyso Gudaha dalka Soomaaliya. - Awdinle Online
Kenya oo xaqiijisay inay Ciidankeeda kala baxeyso Gudaha dalka Soomaaliya.
March 4, 2020 (Awdinle Online) –Wargeyka Daily Nation ee ka soo baxa Dalka Kenya ayaa daabacay in dowladda Kenya ay ku dhawaaqdey in ay gebi ahaan la baxeyso Ciidamadeeda ka jooga Gudaha dalka Soomaaliya.
Wargeysa waxaa uu sheegay in qorshahaas ay wado Wasiirka Difaaca Kenya Monica Juma,kaas oo ay wada hadal kala galeyso Midowga Afrika si ay Kenya ula baxdo Ciidamada ka jooga Soomaaliya.
Wada-hadallad ayaa la shaaciyey in todobaadyada soo socda ay bilaaban doonaan si loo soo geba-gabeeyo howlgalkii Nabad ilaalinta ahaa oo ay Ciidanka Kenya,iyaga oo ku howgalayay Magaca AMISOM ku joogeen Soomaaliya muddo Sideed Sano ah.
Bishii October ee sanadkii 2011kii ayay Ciidamada Kenya soo galeen Soomaaliya,hayeeshee Sanadkii 2012kii ayuu Midowga Afrika u ogolaaday inay kamid noqdaan AMISOM,iyaga oo dagaal ka dhan ah Al-Shabaab ka fuliyeen deegaano kamid ah Gobolada Jubbooyinka iyo Gedo.
Kenya ayaa sanadihii u dambeysay waxaa ay waaheysay weraro kaga imaanayay dhinaca Ururka Al-Shabaab haba ugu badnaadaan deegaano kamid ah Gobolka Waqooyi Bari,waxaana Kenya ay ku cel celisaaa in gudaha Soomaaliya ay ka difaaceyso dalkeeda.
Previous articleC/raxmaan C/Shakuur “Ciidamada Haramcad & Gorgor waxaa loo isticmaalay 4 faa iido siyaasadeed oo sababay dagaal”
Next articlePakistan offers support to Somalia for air force training
RW Rooble oo Amar dul-dhigay Golaha Wasiirada
Duqa degmada Gaalkacyo oo la doortay
Wasiirada Arrimaha Gudaha & Amniga oo la kulmay Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliya
Golaha Wasiirada oo kulankii ugu horreeyay yeeshay
Meydka Gabar yar oo laga helay Xaafad ka tirsan Boosaaso
RW Rooble oo shaaciyay qorshaha Xukuumadda Cusub
Askari Muqdisho ku dilay Nin hubeysan oo dili rabay
Mid kamid ah musharixiinta Duqa Gaalkacyo oo is casilay